Archive du 20190129
Fanavotana takalon’aina tany Tsaratanana Nianjera ny helikoptera
Nitrangana toe-javatra nampalahelo omaly alatsinainy 28 janoary tokony ho tamin’ny 10 ora maraina tany Anadabo, kaominina ambanivohitra Isinko, distrikan’i Tsaratanana (eo anelanelan’i Tsaratanàna sy Andriamena).
Masoivoho Amerikanina vaovao Tena mafy amin’ny resaka paik’ady politika
Taorian’ny nahatapitra ny fe-potoam-piasan’i Robert Yamate teto Madagasikara ny volana martsa 2018, dia ny mpiraki-draharaha Amerikanina Stuart Wilson no nandrindra ny fifandraisana ara-diplomatikan’i Etazonia tamin’ny firenentsika.
Fitondrana Rajoelina Maro ireo ho diso fanantenana aminy
Izay lazaiko tsy maintsy tanterahiko, hoy ny ambentin-tenin-dRajoelina tamin’ny fandresen-dahatra ny vahoaka.
Fikambanana Akata « Hiseho masoandro amin-dRajoelina ireo fahavalony ao an-dapa. »
Nisaotra ilay Nahary ny Malagasy iray manontolo ny avy eo anivon’ny fikambanana Akata Zanadrazana tarihin’ny filohany Brice Christopher Rabehavana.
Governemanta vaovao Dika mitovin’ny teo aloha ihany, hoy i Dany Rakotoson
Arahabaina ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra nahatafanjakana governemanta vaovao tao anatin’ny fotoana fohy ka mirary soa azy.
Robinson, Dadafara, Roland Ratsiraka Hotendrena ho governoran’ny faritra ?
Somary nipirina sy tsy re feo firy ireo kandida filoham-pirenena nisafidy ny hanohana an’i Andry Rajoelina tamin’ny fihodinana faharoa sy ireo mpanao politika sasany lohandohan’ny mpisorona akaiky an-dRajoelina,
Fanovana lalàna sy kajy politika Manaraka ny dian’ny HVM Rajoelina…
Ny 5 febroary ho avy izao amin’ny 12 alina no ho tapitra tanteraka ny fe-potoam-piasan’ny antenimieram-pirenena. Ny filoha ankehitriny ihany koa, dia efa nanambara ny 1 aogositra 2018 fa hofoanany ny antenimerandoholona.
Faritanin’i Toamasina Mampiahiahy ny mponina ny hoaviny
Goavana ny vina napetraky ny filoham-pirenena vaovao mikasika an’i Toamasina, raha mijery ny IEM sy ny velirano, hoy ireo mponina avy any an-toerana naharaisana fitarainana. Eo ihany ny tetikasa Miami fa eo indrindra koa ny resaka seranan-tsambo.
Governemanta Ntsay Christian Tsy mahasolo tena ny faritra 22, hoy ny filohan’ny Za Gasy
Nivoaka tamin’ny fahanginany omaly ny filohan’ny fikambanana Za Gasy, Ratiharison Jean Navandahy taorian’ny nijoroan’ny governemanta Ntsay Christian.
Minisitra Tinoka Roberto Hanangana ANS manerana ny Faritany
Tontosa tao anatin’ny « fair play » tanteraka, omaly alatsinainy tetsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina,
Fifaninanana hidirana mpiasam-panjakana Hadio tanteraka, hoy ny minisitra vaovao
Tontosa soaman-tsara ny fifamindram-pahefana teo anivon’ny minisiteran’ny asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy omaly alatsinainy 28 janoary tetsy 67ha.
Ikongo Raim-pianakaviana 45 taona natelin’ny rano
Raim-pianakaviana iray 45 taona no natelin’ny reniranon’i Manambolo any amin’ny distrikan’Ikongo ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 7 ora hariva.
Misaotra mataho-tody !
Vazivazy zarintenany sendra nandalo tao anaty tambajotran-tserasera iray ny hoe “Mandray roa toy ny vava ; hilelalelana maha lasa minisitra.
Sinoa mpitrandraka volamena Maty voakapa famaky
Lehilahy teratany sinoa iray mpitrandraka volamena any amin’iny Malazamasina Mananjary iny no maty voakapa famaky ny lohany sy ny tanany ny alahady alina lasa teo.
ZAZALAHIKELY NAMOY NY AINY
Namoy ny ainy ilay zazalahikely antsoina hoe Rodriguez. Izy io dia isan’ny nampalahelo ny mponin’i Toamasina vokatry ny fisian’ny zavatra maniry, toa ny rambo, teo amin’ny lohany.
Fikambanana Tsiorintsoa Hohamafisina ny asa sosialy eny Atsimondrano
Tontosa ny sabotsy 26 janoary teo teny amin’ny foiben-toerany teny Iavoloha ny fivoriamben’ny fikambanana Tsiorintsoa Atsimondrano, notarihin’ny filoha mpanorina Nofy Lalaina Haingoharijaona.
Loza mahatsiravina Ankizy 4 mianadahy maty tototry ny tany
Zaza 4 mianadahy no maty tsy tra-drano tototry trano tany Andapa omaly. Nirodana vokatry ny oram-be ny trano nonenany, ka niara-tototra tsy afa-nanavotra aina izy ireo,